Minisitra telo nahatratra taksibe roa ambin’ny folo • AoRaha
Minisitra telo nahatratra taksibe roa ambin’ny folo
Nanao bemidina tampoka tamin’iny lalam-pirenena voalohany iny kosa ireo minisitra telo misahana ny fitandroana ny filaminana. Fiara fitaterana olona miisa roa ambin’ny folo no sarona tamin’ny tsy fanajàna an’ireo fepetra ara-pahasalamana, omaly. Naiditra am-balam-pamonjana avy hatrany ireo fiara ireo. Naiditra fonjakelin’ny Zandarimaria ny mpamily sy ny mpanampy azy.
Tsy fanaovana aron-tava sy tsy fanajana ny isan’ny mpandeha ao anaty fiara ary tsy fisian’ny tsiranoka fanasana tanana amin’ny famonoana tsimok’aretina no ampahany tamin’ny fandikan-dalàna nataon’ireo mpitatitra voasazy ireo.
Nanara-maso ny fampiharana ny fepetra ara-pahasalamana amin’ireo sakana teny Ampitatafika sy Ambatomirahavavy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard; ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny contrôleur général Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ny jeneraly Ravalomanana Richard.
« Tsy misy indrafo ny fampiharana ny lalàna ary hihamafy izany satria tsapa fa mihagoragora ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy handeferana ny tsy fanarahana ny fepetra fa ampiharina aminy ny sazy », hoy jeneraly Ravalomanana Richard.
Nahazo fampitandremana mafy tamin’ireo lehiben’ny mpitandro filaminana ihany koa ireo tafika, polisy ary zandary tany amin’ ireo sakana ireo. Niaraka tamin’ireo minisitra telo nijery ny zava-nisy ny kaomandin’ny Zandarimaria sy ny tale jeneralin’ny Polisim-pirenena ary ny lehiben’ny Tafika.
Voina teny an-dalana :: Lehilahy may niaraka tamin’ny môtô
Loza an-dranomasina :: Rangahy latsaka teny ambony lakana